किन कतिपय केटीहरु कुमारी रहन्छन् ? – Nepal News
किन कतिपय केटीहरु कुमारी रहन्छन् ?
यस्तो के कारण छ, कतिपय केटीलाई कुनैपनि पुरुष मन पर्दैनन् । ती केटीहरु पुरुषलाई लायक नै सम्झदैनन् ।
कारण जान्नुहोस्, किन केटीहरु एक्लै बस्न मन पराउँछन्, विवाहभन्दा ? प्रेम र रिलेशनसीपको झन्झटबाट आफुलाई टाढा राख्छन् कतिपय केटी ।
यस्ता केटी वा केटीहरु मान्छन् कि व्यायफ्रेन्डलाई दिनहुँ मनाएर राख्न भन्दा जरुरी अरु धेरै काम पनि हुन्छन् । यस्ता केटीहरु आफ्नै तालका हुन्छन्, जसलाई कसैले प्रेमको प्रस्ताव गर्न पनि सक्दैनन् । यी केटीहरु अरुको कुरा सुन्दैनन्, बरु आफुलाई लागेको गर्छन ।
यस्तो विश्वास भएका केटीहरु पुरुषसँगको सम्बन्धलाई त्यति महत्व दिदैनन् । यी केटीलाई प्रेमीभन्दा साथीको समूहलाई बढी मनपराउँछन् । यस्ता केटीहरु प्रेमीसँग भन्दा साथीको समूहमा बसेर रमाइलो गर्न बढी रुचाउने गर्दछन् । साथीको समूहमा बढी रमाउने भएकाले उनीहरुलाई कहिले प्रेमीको अभाव महसुस गर्दैनन् । यस्ता केटीको यस्तो व्यत्तित्व हुन्छ, धेरैले उनीहरुलाई भित्रबाट चिन्नै सक्दैनन् ।
जसका कारण उनीहरु एक्लै रहन्छन् । आफ्नो अलग विचार र सोचका कारण यी केटीलाई बुभ्mन पनि कठिन हुन्छ । यस्ता केटी आफुलाई पुरा स्वतन्त्र मान्छन् । उनीहरु आफुलाई पूर्ण हुन कसैको आबश्यक ठान्दैनन् । कैयौपटक आफ्नो करियरलाई यिनीहरुले प्रेम र सेक्सभन्दा धेरै गंभीरताका साथ लिन्छन् । एजेन्सीको सहयोगबाट
ट्याग्स: virgin girl
पहिरोमा बालकको मृत्यु अरनिको राजमार्ग अबरुद्ध